Sida loo dar farshaxanka ee Lugood
> Resource > Lugood > Sidee ayaan ku dari kartaa farshaxanka si My Lugood Library
Music ayaa digital in aad ka iibsan dukaamada music sida Lugood ama Amazon MP3 had iyo jeer la iman doonaa arts. Laakiin inta jeer ee aad wada dooxay CD ah ee Lugood ama music qoraalana ka goobood music geeyo oo kaliya si aad u hesho lahayn farshaxanka ama farshaxanka qaldan aad taag wejiga? Taasi waxaa laga yaabaa in aad u ba'an.
Warka wanaagsan waa in laftiisa Lugood qabtaan shaqo mudan ee degsado farshaxanka, laakiin mar walba waxaa jira a heeso dhowr ama albums in ay ku turaanturoon kor. Maxaa ka xun, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u qabtaan "Get Album farshaxanka" gacanta u song mid kasta oo ka mid ah.
Sidaas darteed ma jiraa hab sahlan in aad ku darto farshaxanka si aad ururinta music weyn ee Lugood? Nasiib wanaag, ay jawaabta haa tahay. The Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) si toos ah ka heli kartaa farshaxanka ah ee maktabadda Lugood iyo markaas aad si fudud Cudarada karaa farshaxanka si ay files music si ay u qaado meel walba. Ma doonaysaa in ay isku day ah oo hadda? Aan hoos ku tutorial faahfaahsan arko.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo barnaamijkan iyo rakibi waxa aad Mac. Markaas furo barnaamijka kaas oo si toos ah iskaan doonaa oo dajiyaan maktabadda Lugood si aad u saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood. Iyo barnaamij ku samayn doonaan iskaanka mar kasta waxaa la bilaabay.
Tag madax ah uu furmo suuqa hoose. Markaas hubi Search sanduuqa tilmaamayo Songs Allaha oo guji badhanka Scan. Sidaas, barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli dhammaan macluumaadka u music ah Lugood, oo ay ku jiraan fanaaniin, faahfaahinta track, lyrics of arts iyo dabcan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u hubiso Search sanduuqa tilmaamayo labalaabka Songs, barnaamijka ayaa sidoo kale ka heli kartaa tus ee Lugood iyo waxaad go'aansan kartaa oo ka mid ah inuu u dhaqaaqo qashinka.
3 dar arts in dhammaan faylasha music ah
Dooro hees iyo hubi farshaxanka cusub ee laga helay khaanadda saxda ah. Markaas riix batoonka Codso in Cudarada farshaxanka si ay file music ah. Waxaad dooran kartaa dhowr heeso oo isku xigta iyo codsan waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad beddesho farshaxanka adigu by, si fudud ayaad samayn kartaa barnaamijkan. Guji Edit icon ee khaanadda saxda ah oo file a image deegaanka Jiida Jaximo aagga tahay albumka. Markaasaa waxaa u sameeyay.
Awoodda in ay ku darto farshaxanka album heesaha badan mar waa waxa barnaamijkan qoreysa. Waxaad ku siin kartaa go a si aad naftaada u xukumaan iyo aad doonaysid in aad u jecel yihiin.